Blackview BV8800 မိတ်ဆက်ကမ်းလှမ်းချက် | ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignatius ခန်းမ | 10/01/2022 13:00 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ထုတ်လုပ်သူ Blackview သည် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည့် Blackview BV2022 ဖြင့် 8800 ခုနှစ်အတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်းများအတွက် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်တွင် တင်ပြခဲ့သည်။ မိတ်ဆက်ပွဲ ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ ကိုင်လို့ရတယ်။ သာ 225 ယူရိုသည် AliExpress ကနေတဆင့်.
ဒါ့ပြင် အဲဒီ့ဈေး၊ VAT နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်များ ပါဝင်သည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ထပ်လောင်းအံ့သြစရာကို ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Blackview BV8800 သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်အရာကမ်းလှမ်းသနည်း။ သိချင်ပါက၊ အထူးသဖြင့် သင့်မိုဘိုင်းလ်အဟောင်းကို သက်တမ်းတိုးရန် ကောင်းမွန်ပြီး စျေးသက်သာသော terminal တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါက ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Blackview BV8800 သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စီးရီးတစ်ခု ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆွဲဆောင်မှုများ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းဟောင်းကို သက်တမ်းတိုးသည့်အခါ။
တဖက်မှာလည်း ကျနော်တို့ တွေ့တယ်။ ရက် 30 အထိ အသင့်အနေအထားဖြင့် ကြီးမားသော ဘက်ထရီ. အခြားစက်များကို အားသွင်းရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီ။ စနစ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ကင်မရာ4လုံးညဥ့်ရူပါရုံ၊ 90Hz display ကိုစစ်ရေးအရ တုန်ခါမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင် ရေတွင်ပါ အလွန်အစွမ်းထက်သော ပရိုဆက်ဆာ...
သငျသညျအပေါငျးတို့သသိလိုလျှင် Blackview 8800 အသစ်၏ သတ်မှတ်ချက်များငါဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်
1 Blackview BV8800 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
2 ကင်မရာ4လုံး
3 ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် 90Hz မျက်နှာပြင်
4 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ ပါဝါအားလပ်ချိန်
5 Android 3.0 ကိုအခြေခံထားသော Doke OS 11
7 ဘက်ထရီ- ရက် 30 အသင့်အနေအထား
8 လုံခြုံရေးနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ
9 ဤကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်
Blackview BV8800 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ကင်မရာ4လုံး
ကင်မရာများ၊ ဘက်ထရီများနှင့်အတူ စက်ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ Blackview BV8800 ၏အဓိကအာရုံခံကိရိယာသည် 50 MP သို့ရောက်ရှိသည်။ဓာတ်ပုံတွေကို ကျယ်စေပြီး အသေးစိတ်အားလုံးကို မြင်နိုင်စေမယ့် Resolution တစ်ခုပါ။
ဒါ့အပြင်တစ် ဦး ပါဝင်သည် 20 MP အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ ညဘက်မြင်ကွင်းအမှောင်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင် သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်စေသည့် LED အစုံကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အမှောင်ထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောထောင့်သည် 8 MP Resolution ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်သည်။ ကြည့်ရှုထောင့်117º.
သူလည်း ပါဝင်ပါတယ်။2MP အတိမ်အနက်အာရုံခံကိရိယာပုံတူမုဒ် ဓာတ်ပုံများတွင် နောက်ခံကို မှုန်ဝါးစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အာရုံခံကိရိယာများအားလုံးသည် အလွန်လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်မှုတွင် ဖမ်းယူမှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် Artificial Intelligence ကို အားကိုးပါသည်။
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုလျှင် ရှေ့ကင်မရာကျွန်ုပ်တို့သည် 16 MP အာရုံခံကိရိယာအကြောင်း ပြောဆိုရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ယုတ္တိနည်းအရ အံ့ဖွယ်အမှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကင်မရာ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် Artificial Intelligence ကို အသုံးပြုသည့် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် 90Hz မျက်နှာပြင်
90 Hz ဖန်သားပြင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဂိမ်းများနှင့် လမ်းကြောင်းပြခြင်းကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ ခံစားနိုင်စေပါသည်။ 60Hz မျက်နှာပြင်များထက် ချောမွေ့သည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှိ အလယ်အလတ်တန်းစား စက်အများစုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
90HZ မျက်နှာပြင်ဖြစ်ခြင်း၊ စက္ကန့်တိုင်းတွင် ပုံ 90 အစား ပုံ 60 ကိုပြသသည်။. အစပိုင်းတွင်၊ ၎င်းသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဟု ထင်ရသော်လည်း သင်မကြိုးစားမချင်း၊ ၎င်းသည် ထင်မှတ်ထားသည့် ဘဝအရည်အသွေး တိုးလာမှုကို သင်သဘောပေါက်မည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ်တစ်နှစ်၊ Blackview အတွက် အထူးသဖြင့် MediaTek ပရိုဆက်ဆာကို လောင်းကြေးထပ်သည်။ Helio G96၊ 8-core ပရိုဆက်ဆာ AnTuTu စံနှုန်းများအရ ရမှတ် 301.167 ရှိသည်။
ဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ရှာတွေ့ပါတယ်။ 8 GB RAM မန်မိုရီအမျိုးအစား LPDDR4X ဘေးတွင် (ဂိမ်းများအတွက် စံပြ) သိုလှောင်မှု 128GB၊ UFS 2.1 အမျိုးအစားအနှောင့်အယှက်များ သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည်။
terminal သည်သင့်ထက်ပိုမိုပူလာခြင်းကိုကာကွယ်ရန် Blakview BV8800 တွင် s ကိုတွေ့သည်။အရည်အအေးစနစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂိမ်းကစားနေစဉ် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကို ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအပြည့်ဖြင့် ရိုက်ကူးနေချိန်၌ပင် စက်၏အပူချိန်ကို အချိန်တိုင်းတွင် ထိန်းထားပေးသည်။
Android 3.0 ကိုအခြေခံထားသော Doke OS 11
ဒီထုတ်လုပ်သူ စျေးကွက်မှာ ယမန်နှစ်က စတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ terminal တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုက အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်အလွှာ။
စိတ်ကြိုက်အလွှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Doke OS 3.0 အကြောင်း ပြောနေတာ Android 11 ကိုအခြေခံသည် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သော လက်ဟန်ခြေဟန်လမ်းညွှန်မှု၊ ပိုမိုအမြင်အာရုံနှင့် အလိုလိုသိသာသောဒီဇိုင်း၊ အပလီကေးရှင်းကြိုတင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်ထားသော notepad ကဲ့သို့သော ဤ Android ဗားရှင်းတွင်ပါလာသော အင်္ဂါရပ်အများအပြားကို အခွင့်ကောင်းယူသည်။
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကြောင့် Blackview BV8800 သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်ဘက်တွင် ဝတ်ဆင်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပါဝင်ရုံသာမက MIL-STD-810 စစ်ရေးထောက်ခံချက်သို့သော်၊ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုရိုက်ရန် ရေအောက်စက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထို့အပြင် ညမြင်ကွင်းကင်မရာကြောင့် ပျောက်ဆုံးသွားသောအဖော်ကို ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိရစ္ဆာန်ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ချုပ်ပြီး သီချင်းဆိုပါ။
ဘက်ထရီ- ရက် 30 အသင့်အနေအထား
Blackview BV8800 အတွင်းတွင် အလွန်ကြီးမားသော အရာတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိရသည်။ 8.380 mAh ဘက်ထရီဖုန်းကို 720 နာရီ standby ထားနိုင်စေသည့် ဘက်ထရီဖြစ်ပြီး 34 နာရီကြာ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည်...
စက်ပစ္စည်းအား အားသွင်းခြင်းသည် dyssey နှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် Blackview BV8800 သည် 33W အမြန်အားသွင်းစနစ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။၎င်းကို 1,5 နာရီအတွင်းသာ အားသွင်းနိုင်စေပါသည်။ အားသွင်းချိန် သိသိသာသာ တိုးလာသော်လည်း အားသွင်းချိန် နည်းပါးသော်လည်း ပါဝါအောက်ပိုင်း အားသွင်းကိရိယာများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Blackview BV8800 တွင် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ start ခလုတ်ပေါ်တွင်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် တစ်ခု ပါဝင်သည်။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုကျွန်ုပ်တို့တွင် ညစ်ပတ်သော သို့မဟုတ် အလုပ်များသောလက်များရှိနေချိန်တွင် စမတ်ဖုန်းကို လော့ခ်ဖွင့်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်လည်း NFC ချစ်ပ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်ဆံအိတ်မပါဘဲ အပြင်ထွက်နိုင်စေပြီး မည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမဆို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းတွင် Google ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သောကြောင့် Play Store တွင် ရရှိနိုင်သော မည်သည့်အက်ပ်ကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းအကြောင်းပြောရင် တစ်မျိုးပြောရမယ်။ မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်7ခုအထိ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော အထူးခလုတ်လည်ပင်းတစ်ဝိုက်တွင် သယ်ဆောင်ရန် ချိတ်တစ်ခု၊ ကျောပိုးအိတ်၊ အိပ်ဆောင်အိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြင်ဘက် အပန်းဖြေခရီးများအတွက် လေထုဖိအား အာရုံခံကိရိယာ...
သင်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဤမိတ်ဆက်ပရိုမိုးရှင်းကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ပထမဆုံး 500Blackview BV8800 ကို ရုံဖြင့် သင်ရနိုင်သည်။ AliExpress မှတဆင့် ယူရို ၂၂၅.
ပရိုမိုးရှင်းကို လာမည့် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်အထိ သို့မဟုတ် လကုန်အထိ ရရှိနိုင်သည်။ ယူနစ် 500 နဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » Blackview BV8800 ကို စတင်ရောင်းချပေးသည့် ကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း- အဆင့်ဆင့်